Ọ bụ eziokwu na ndị dike obodo anyị, Kpọmkwem Ngwaọrụ, gbasaa ugbu a na United Kingdom na Australia, ha ka dị oke oke na mba ndị na-asụ Bekee. N'afọ mbụ a, anyị nwere ohere dị ịtụnanya iji zute otu ndị isi nwere ọgụgụ isi Nlele email.
Nlele email nwere ọnụahịa ịsọ mpi na nnyefe pụtara ìhè. Ha arụgogola ụlọ ha ma nwee sistemụ azụmaahịa siri ike na nke ukwuu yana SITE API siri ike. E depụtara Emailvision na Ntụle kachasị ọhụrụ nke Forrester nke ndị na-enye ọrụ Email kachasị elu. Ndị folks a na-amalite maka uto na United States!